Troposphere Chanel Born 18ml – SUNNY eSTORE
Troposphere Chanel Born 18ml
TroposphereSKU: PF-TROP-1-319 (S016)
The essence of individuality. High-Class, Luxury with good taste.
လေပြေညှင်းလေး တိုက်ခတ်နေသလို စိတ်ကြည်လင်လန်းဆန်းသွားစေမယ့် Troposphere ရဲ့Chanel Born လေးကတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး Luxury ဆန်ဆန် ရနံ့သင်းသင်းလေးနဲ့ Cool Type အမျိုးအစားလေးဖြစ်ပါတယ်။ White Flower Tone လေးကို အခြေခံထားတာဖြစ်ပြီး စိတ်ကြည်လင်လန်းဆန်းစေတဲ့အပြင် နူးညံ့သောရနံ့ ပေးစွမ်းပါတယ်။ Top Notes အနေဖြင့် Rose (နှင်းဆီ), Jasmine (စံပယ်), Citrus (လီမွန်) တို့ပေါင်းစပ်ပါဝင်သဖြင့် စိတ်ကြည်လင်မှု ကိုအပြည့်အဝပေးစွမ်းပါသေးတယ်နော်။
Chanel Born လေးကတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနေတတ်ပြီးအေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့ ပင်ကိုယ်ကိုယ်သင်းနံ့သင်းသင်းလေး ပိုင်ဆိုင်လိုသောလူငယ်လေးတွေတွက် သင့်တော်ပါတယ်။
Troposphere ရဲ့ထူးခြားချက်လေးကတော့ Global Brand များ၏ရနံအတိုင်း 100% Coverage ရရှိအောင် ဖန်တီးထားသော ကြောင့် Luxury Premium Perfume တစ်ခုအနေဖြင့် ဖော်စပ်ထားတာဖြစ်လို့ ရေမွှေးချစ်သူများတွက်စိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်အဝ ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Includes: 1 bottle of Chanel Born (18ml)